Vagari veBritish neAmerica vakaudza kuti vadzivise mahotera eKabul
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Afghanistan Kuputsa Nhau » Vagari veBritish neAmerica vakaudza kuti vadzivise mahotera eKabul
Afghanistan Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Kubva zvakatorwa neTaliban, vazhinji vatorwa vabva kuAfghanistan, asi vamwe vatapi venhau nevashandi vekubatsira vanoramba vari muguta guru.
VaTaliban vari kutsvaga kuzivikanwa kwenyika dzese uye rubatsiro kuti vadzivise njodzi yeruzhinji.
VaTaliban vari kunetsekana kuti vabate kutyisidzira kubva muchitsauko cheISIL cheAfghanistan.
Vanhu vazhinji vakaurayiwa kumosque mukurwisa kwakataurwa neIslamic State muKhorasan Province, ISKP (ISIS-K).
Dhipatimendi reHurumende reUnited States rayambira vagari vese vemuUS muAfghanistan kuti vagare kure nemahotera ari muguta guru reKabul. Britain yekune dzimwe nyika, Commonwealth uye Hofisi Yekuvandudza yakapa yambiro yakafanana kune vese vagari vekuUK vari munyika ino.
“Vagari vemuUS vari pedyo kana pedyo ne Serena Hotel inofanirwa kuenda nekukasira, "akadaro US State department, ichidana" kutyisidzira kwekuchengetedza "munzvimbo iyi.
"Nekuda kwenjodzi dzawanda unorayirwa kuti usagare mumahotera, kunyanya muKabul," Bazi reBritain rezvekunze, Commonwealth neCommunity Office rakati.
Yambiro iyi yakauya mazuva mashoma mushure mekunge vanhu vazhinji vaurayiwa kumosque mukurwisa kwakataurwa neIslamic State muKhorasan Province, ISKP (ISIS-K).
Sezvo Taliban kutora, vazhinji vatorwa vabva kuAfghanistan, asi vamwe vatapi venhau nevashandi vebetsero vanoramba vari muguta guru.
Iyo inozivikanwa Serena Hotel, hotera yepamusoro inofarirwa nevashanyi vebhizinesi nevashanyi vekunze, yakamborwiswa nemagandanga kaviri.
VaTaliban, avo vakatora masimba muAfghanistan muna Nyamavhuvhu, vari kutsvaga kuzivikanwa pasi rose nerubatsiro kuti vadzivise njodzi yezvemagariro uye kurerutsa dambudziko rehupfumi hwenyika.
Asi, seboka remagandanga parichichinja kubva kuboka rakashongedzwa kuenda pasimba rinodzora, iri kunetsekana kutyisidzira kubva muchitsauko cheISIL cheAfghanistan.
Pakupera kwesvondo, mukuru Taliban uye vamiriri veUS vakaita hurukuro dzekutanga dzakatarisana kumeso muQatari guta guru reDhaha kubva kubviswa kweUS.
Hurukuro "dzakanangana nezve kuchengetedzeka uye kunetseka kwehugandanga uye nzira yakachengeteka yevagari vemuUS, vamwe vekunze uye vatinoshanda navo muAfghan," sekutaura kwemutauriri weDhipatimendi reNyika, Ned Price.
Sekureva kweDhipatimendi reHurumende, hurukuro idzi dzaive "dzakapusa uye hunyanzvi" uye vakuru veUS vakadzokorora kuti "vaTaliban vachatongwa nezviito zvavo, kwete mazwi ayo chete".
VaTaliban vakati US yakabvuma kutumira rubatsiro kuAfghanistan, kunyange hazvo US yakati nyaya iyi yaingokurukurwa chete, uye kuti chero rubatsiro ruchazoenda kuvanhu veAfghan kwete hurumende yeTaliban.